Shiinaha Mashiinka Mashiinka dhalada Mashiinka iyo alaabada | Tonva
Faahfaahin aasaasi ah Qalabka ceyriinka ah
Nidaamka Shisheeyaha Ballaca fur
Madaxa dhinta Aagagga kululaynta
Nidaamka isku haynta Masaafada isku haysa
Isticmaalka awoodda Cadaadiska hawada
Qaboojinta isticmaalka biyaha
Qaabkan waxaa lagu soo qaatay sida soo socota: madaxa dhinta badan, saldhig laba jeer iyo wax soo saar sare. Dhalada dhumucda dhalada ee dalool kasta ayaa la sameeyaa xitaa iyadoo qaabeynta madaxa dhimista quudinta xarunta, oo ay ka shaqeyso xarunta mashiinka CNC.
2.Makiinadu waxay isticmaashaa sumadda dibedda laga keenay ee loogu talagalay qaybaha hidda iyo waxay qaadataa laba waal oo saami ah si loo xakameeyo xawaaraha socodka iyo cadaadiska wareegga saliidda oo sidoo kale lagu maamuli karo khadka tooska ah. Dhaqdhaqaaqa kor ku xusan waa mid deggan oo siman.
3.MOOG 100 Qodob Nidaamiyaha Xakameynta Xakameynta ayaa la qaadan karaa si loo sii wanaajiyo tayada wax soo saarka.
5.Mashiinka waxaa loo qaabeyn karaa inuu ku shaqeeyo gacanta robotka, gudbiyaha, tijaabiyaha soo daadinta, sumadda caaryada ku jirta, mashiinka baakadaha, iwm sida aad u baahan tahay.
Hore: MADOW MAKIINADDA MADASHA TVA 1000L- 10000L
Xiga: MAKIINADDA MAGAALADA DHALASHADA